Fanodinana fako any Toliara : hamokatra zezika 4.000 t isan-taona (NewsMada) | AEMW
Fanodinana fako any Toliara : hamokatra zezika 4.000 t isan-taona (NewsMada)
Voalohany! Mandeha ny asa fanamboarana ny Foibe fanodinana ny fako an-tokantrano (CSVD) any Toliara. Nahatanteraka azy ny fiaraha-miasa eo amin’ny kaominina an-drenivohitra Toliara, ny kaominina ambanivohitra Belalanda ary ny tetikasa Passat avy amin’ny Welthungerhilfe. Any amin’ny toby fanariam-pako Aboriha (7 km miala an’i Toliara), ao amin’ny kaominina Belalanda ny toerana hananganana ity toby fanodinana fako ity. Manara-penitra sady mitsinjo ny tontolo iainana ity fotodrafitrasa ity.
Mahavita zezi-pako kaomposta 2.000 hatramin’ny 4.000 t isan-taona ny fako 10.000 t. Hanamboatra biriky kely ahazoana mahandro sakafo koa ao amin’ity toerana ity, sady voalohany eto Madagasikara, tantanin’ny kaominina.
Nofinofy sy kabary politika ny eny Andralanitra
Manodidina ny 100 hatramin’ny 120 t isan’andro ny fako any Toliara, ka azo ahodina ao amin’ny CSVD ny 50-80%-n’ny fako any an-toerana. Hahaleo tena amin’ny herinaratra ny toby satria hisy fitaovana misarika angovo avy amin’ny masoandro.
Efa nanomboka ny 7 jona ny asa, saingy ny 17 aogositra teo vao napetraka ny vatofototra voalohany. Vita ny 20%-n’ny asa fanorenana ary vinavinaina ho vita tanteraka amin’ny volana novambra ho avy izao.
Eto an-dRenivohitra, efa ela ny nahenoana fa tokony hahodina ny fako eny Andralanitra. Zary nofy sy kabary politika anefa izany, fa tsy nisy nahatanteraka, ary na ny toerana aza, efa tery sady mandoto ny tontolo iainana.
Mpanelanelan’ny Sadc, Chissano : « Misy olana sarotra ilana fitandremana eto » (NewsMada) →